माइतीघरमा भएको मौन प्रदर्शनमा प्रहरीले गर्यो सेल्युट ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/माइतीघरमा भएको मौन प्रदर्शनमा प्रहरीले गर्यो सेल्युट !
सरकारकाविरूद्ध असतुष्ट जनाउँदै अहिले माइतिघरमण्डलाका युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरुले क्वारेन्टिनलाई जोखिमयुक्त बनाउन र शतप्रतिशत पीसीआर परीक्षण गर्न माग गरेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को जोखिम रहेकाले शारीरिक दुरी बनाएर व्यवस्थित देखिएको प्रदर्शनमार्फत उनीहरुले सरकारलाई प्रश्न गरे।कोरोना महामारीविरुद्ध सरकारको काम गराइ र भ्रष्टाचारका विषयमा उनीहरुले विरोध गरिरहेका थिए। गएको मंगलबार बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेर सुरु भएको व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, शतप्रतिशत पिसिआर टेस्ट, आरडिटी परीक्षण बन्द गर्नुपर्ने, खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने लगायत माग उनीहरुले आज पनि राखे।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत भूभाग नक्सामा समेट्न आज नै संसदमा संविधान संशोधन हुने भएकाले माइतीघरको प्रदर्शनलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर विरोध भइरहेको भए पनि प्रदर्शनकारीहरुले कोरोना जोखिममा राम्ररी काम गर्नुपर्नेबाहेकका माग राखेका थिएनन्। उनीहरुले नयाँ नक्साको स्वागत गरिएको ब्यानरहरु पनि बोकेका थिए।बिहान माइतीघर निस्कने हरेक चोकमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। प्रदर्शनमा जानेहरुलाई प्रहरीले रोकिरहेका थिए। बिहान प्रदर्शन सुरु हुने बेलामा माइतीघरबाट नै केही प्रदर्शनकारी प्रक्राउसमेत परे। मोबाइल सम्पर्क नहोस् भनेर सरकारले जामर पनि राखेको थियो। जसले गर्दा नेटवर्क विच्छेद भइरहेको थियो।
देशैभरिका घरबेटीलाई गृह मन्त्रालयले दियो एस्तो आदेश, अटेर गरे हदैसम्मको सजाय हुने चेतावनी !